Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2013 - Wikipedia
Rabiby (voalohan'ny taonjato faha-16 aorian'i Kristy), mpanjaka arabo jiosy teo Ambohidrabiby dia nanan-janaka telo ka ny vavimatoa dia i Rabefaravolamanjaka ary ny vavy aivo dia i Ramaintsoanala (niova anarana ho Randapavola). Nisy vady namboarina roa teo Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan-dRabiby. Raha tonga hangataka an'i Rabefaravolamanjaka i Andriamanelo mpanjakan'Alasora dia i Randapavola no nomen-dRabiby ho vadiny fa Rabefaravolamanjaka kosa nomeny ho vadin'Andrianamboninolona, zanak'Andriamananitany. Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Ao antampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe "Ambohitrandriananahary", no namponenin-dRabiby i Rabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. (tohiny...)
Ny lambamena dia ilazana lamba amonosana ny maty teo amin'ny ntaolo. Anarana fotsiny ihany ny lambamena fa mety ho volonkazo ny lokony, mety ho fotsy na mavo na mena mihitsy. Samy manana ny soratra sy lokony ireny lambamena ireny ary ny sasany aza dia misy ny anaran'ilay razana vita amin'ny vakana. Miankina amin'ny lokony sy ny halehibeny (misy telo vitrana, 5 vitrana, sns...) anefa no vidiny. Araka ny fiteny hoe "izay sahy maty no mifono lambamena" dia ny lamba miloko mena no tena lafo vidy ka ireo olona manankaja sy mahery fo teo amin'ny fiarahamonina no tena nividiananan'ny olona azy sy notolorana azy satria mendrika izany noho ny vidiny. Ireo lamba tsy dia misy loko firy kosa (volonkazo) dia mora kokoa ny vidiny. Ny "lamba landy" kosa dia ampiasaina hilazana ireo lamba vita amin'ny landy saingy hitafian'ny velona. (tohiny...)
Ny vazimba dia anarana niantsoana ireo mponina nonina taty anivon'i madagasikara (taty Imerina sy Betsileo, bara, anjozorobe) talohan'ny nanjakan'i Rabiby sy Andriamanelo (taonjato faha-16 ap JK). Rabiby, mpanjaka arabo, sy Andriamanelo, mpanjaka maley mantsy no navahan'ny lovantsofina fa arabo sy maley ary ireo olomainty mpanompony no angaralahy,fa ireo sisa efa nonina taty anivontany tamin'izany dia vazimba. Ary i Rabiby no nanenjika voalohany ny vazimba sy nanosika azy handositra.
Araka ny tantara,ireo mpitondra fanjakana maley sy arabo tonga taty anivon'i Madagasikara (taty Imerina sy Ibetsileo) nanomboka ny taonjato faha-15 no nampiasa voalohany ny teny hoe " vazimba" mba hiantsoany ireo mponina efa tompontany taty anivon'ny riaka tamin'ny fahatongavany teto. Ohatra amin'izany, i Andriamanelo dia voalazan'ny lovantsofina fa maley, anefa i Rangita sy Rafohy izay renibeny dia voalazan'ny lovantsofina fa vazimba. Toy izany koa, i Rabiby arabo raha nandao an'Ambohitsitakatra Anjozorobe, dia tonga teo Ankotrokotroka (tato aoriana lasa Ambohidrabiby), ka nandroaka ireo mponina teo izay vazimba no nahafantarany azy .
Rabiby (voalohan'ny taonjato faha-16 aorian'i Kristy), mpanjaka arabo jiosy teo Ambohidrabiby dia nanan-janaka telo ka ny vavimatoa dia i Rabefaravolamanjaka ary ny vavy aivo dia i Ramaintsoanala (niova anarana ho Randapavola).
Nisy vady namboarina roa teo Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan-dRabiby. Raha tonga hangataka an'i Rabefaravolamanjaka i Andriamanelo mpanjakan'Alasora dia i Randapavola no nomen-dRabiby ho vadiny fa Rabefaravolamanjaka kosa nomeny ho vadin'Andrianamboninolona, zanak'Andriamananitany.
Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Ao antampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe "Ambohitrandriananahary", no namponenin-dRabiby i Rabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. Vadiben'Andrianamboninolona i Rabefaravolamanjaka ka matetika Andrianamboninolona no mipetraka maharitra eo amin'i Rabefaravolamanjaka ka nahavery ny anaran'io tendrombohitra io ho "Ambohitrandriananahary", anarana nalain'Andrianamboninolona tamin' "Ambohitrandriananahary", vohitr'Andriamananitany rainy eo ampita avaratr'Alasora.
Nisy fotoana narary mafy ny mpanjaka Rabiby teo Ambohidrabiby ary naika maty mihintsy nefa dia tsy norahirahian'ireo zanany izy. Fa ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka no nikarakara sy nahasitrana azy. Koa rehefa sitrana i Rabiby dia hoy ny teniny mantsy ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka ireo: " Tsy mba zafiko ianareo fa toy ny zanako naterako, fa ny zanako tsy nahavita izay vitanareo". (tohiny...)
Ny atao hoe foko malagasy dia, amin'ny ankapobeny, ireo olona rehetra miaina ao Madagasikara. Ny razan'ny malagasy ankehitriny dia tonga tamin'ny sambo avy any Indonezia tamin'ny taonjato fahatelo hatramin'ny taonjato fahadimy. Ny hamantarana ny fihavian'ny malagasy avy any Indonezia dia ny fiteny tenenin'ny malagasy amin'izao fotoana izao : fantatra fa misy fitovizana lehibe amin'ny fiteny sasany any amin'ny Nosin'i Borneo ny fiteny malagasy, indrindra eo amin'ny lafin'ny voambolana ampiasaina : rehefa manonona ny volana izao ohatra, ny fiteny indoneziana (Bahasa Indonesia) dia mampiasa ny teny "Bulan" ary ny teny javaney "Wulan", mitovitovy fanononana amin'ny teny malagasy, saingy ny fomba fanoratana fotsiny no miova.
Ny malagasy koa dia manan-drazana avy any Afrika atsinanana ary arabo, ny hamantarana an'izany dia ny endrik'ireo malagasy tandrefana sy tavaratra. Ny endriky ny foko mipetraka any Afrika atsinanana dia mitovy amin'ny afrikana miaina eo amin'ny kontinenta afrikana. Ny fihavian'izy ireo ao Afrika dia eo amin'ny tontolo soahily nentina ho andevo ao Madagasikara na nifindra monina.
Ny mahasamihafa an'ny mponina malagasy avy any Indonezia sy ny mponina malagasy avy any Afrika atsinanana dia ny endriny. Ny avy any Indonezia dia manana lokon-koditra fotsifotsy kokoa noho ireo izay avy any Afrika, ary mbola tsotra kokoa ny volony noho ny afrikana. (tohiny...)
I Kazakstana (na Repoblikan'i Kazakstana, amin'ny fiteny kazàka : Qazaqstan siril. Қазақстан, /qɑzɑqˈstɑn/; anarana lava : Qazaqstan Respublïkası, siril. Қазақстан Республикасы) dia firenena ao amin'ny faritra avaratr'i Azia afovoany. I Kazakstana dia faritanin'ny Fanjakana Rosy ary anisan'ny repoblika mpikamban'ny Firaisan'ny Repoblika Sosialista Sovietika taloha, ary nahaleotena tamin'ny taona 1991. Kazàka no anaram-ponina.
Ny renivohiny dia Astana ; ny fiteny kazàka no tenim-panjakana ary ny fiteny rosy no teny ofisialy.
Raha ny arkeolojian'ny teny no jerena, ny teny hoe « Andriana » dia efa nampiasain'ireo vazimba (anarana iantsoana ireo mponina taty anivontany talohan'ny nanjakan'i Rabiby sy Andriamanelo ny taona 1500 taorian'i J.K.) efa hatry ny ela. Porofon'izany, maro ireo vazimba no ahitana ny teny hoe « andriana » amin'ny anarany. Manarak'izany, ny teny hoe « andriana » dia saika efa nampiasain'ny foko maro eran'ny madagasikara ary efa aman-jatotaona tokoa. Midika izany fa tsy foko tokana na vitsy no nivoy ny foto-mpandaminana " andriana" araka ny filazan'ny olona sasany azy.
Ny teny hoe « andriana » dia manana heviny roa: ny voalohany dia hoe « andry », izay manana ny lanjany tokoa teo amin'ny ntaolo, satria ny tranon'izy ireo dia misy andry iray lehibe eo afovoany izay ianteheran'ny trano iray manontolo. Ny andriana ary dia ilazana olona azo ianteheran'ny maro. Heviny faharoa, ny « andriana » dia ilazana koa toerana azo atorizana. Zava-dehibe teo amin'ny ntaolo tokoa fahizay ny fandriampahalemana ka na ny fototeny aza dia « andriana ». Ilazana koa izany fa ny « andriana » dia olona azo ianteherana amin'ny fandriampahalemana. Marihina anefa, ny teny hoe « andriana » dia saika fahita amin'ny anaran'ny olona rehetra na andriana, na hova na mpanompo. Izany hoe tsy teny natokana hampiasain'olombitsy ny « andriana » fa azon'ny rehetra hampiasaina tsara.
Tany amboalohany, ny « andriana » dia ilazana ireo olona ianteherana, koa ny raim-pianakaviana rehetra na lehiben'ny fianakaviana dia « andriana » avokoa.Io ilay vanim-potoana voatazon'ny lovantsofina hoe « samy andrian-ko ho azy ». Tato aoriana anefa, rehefa nihamaro ny olona sy mba ho fandaminana ny fiaraha-monina dia nifamory ka nifidy "andriana" iraisana. Io andriana iraisana io dia ny " be taona indrindra " teo amin'ny fiarahamonina noho izy tompon'ny fahendrena. Mbola voatazon'ny angano izany ka hoy izy manao hoe " vorona nifidy andriana". Rehefa maty ary ny " andriana" voafidy dia mifidy "andriana hafa indray. Dia toy izay hatrany. Mbola maro ireo foko eto madagasikara mandrak'ankehitriny no manaraka io fomba fifidianana io.
Madagasikara na Repoblikan'i Madagasikara (anarana ofisialy) dia firenena ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Fitambarana nosy i Madagasikara raha amin'ny lafin'ny firenena no jerena. Madagasikara ihany koa no iantsoina ilay nosy malagasy lehibe miendrika tongotra havia. Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an-tany ny nosy Madagasikara. Toerana fonenan'ny 5%-n'ny biby sy zavamaniry misy eto amin'izao tontolo izao; ka mihoatra ny 80%-n'ireo dia Madagasikara irery ihany no manana azy (na ahitana azy eto an-tany). Voasokajy ao anatin'ireo ny Gidro sy ny Rajako isankarazany, ny fosa, ny fianakaviam-borona telo (3) sy zava-maniry toy ny Baobaba izay ahitana sokajy mihotra ny enina (6).
I Madagasikara dia nipoitra tamin'nny fiparitahan'ny kaontinanta Gondwana tamin'ny taona tamin'ny taona -35 tapitrisa talohan'i Jesoa Kristy : voalohany i Madagasikara ary i India dia nisaraka tamin'i Afrika ary dimampolo tapitrisa taona taoriana, nisaraka tamin'i India i Madagasikara ary nitokana teo hatramin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy hita na aiza na aiza afatsy any Madagasikara valopolo isan-jaton'izay karazam-biby sy karazan-javatra misy any. Misy faritra ekolojika maromaro ao Madagasikara ary mihakely dia mihakely ireo faritra ekôlôjika noho ny asan'ny olombelon (tavy, fandringanana ny ala, fihazanana ny biby) ; ankehitriny dimy amin'ny sivipolo isan-jaton'ny ala taloha no voaringana. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2013&oldid=691226"
Voaova farany tamin'ny 26 Desambra 2013 amin'ny 20:04 ity pejy ity.